DHEGEYSO-Xarun lagu dawaynayo xanuunka qaaxada oo laga hirgeliyey degmada Bandar-bayla. – Radio Daljir
Janaayo 19, 2017 3:42 b 0
Bandar-bayla, Jan 19 2017-Degmada Bandar-bayla ee gobolka Karkaar ayaa waxaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland ay markii ugu horaysay ka hirgelisey xarun cusub oo loogu talagalay in lagu dabiibo dadka qaban cudurka Qaaxada.
Madaxa qaaxada Puntland Dr Cali Xasan oo kamid ahaa mas’uuliyiintii ka qaybgalay furitaanka xarunta cusub ayaa waxa uu sheegay in xaruntaani ay waxbadan ka qaban doonto baahidii dadka kunool bariga gobolka Karkaar u qabeen xarun nooceeda ah.
http://daljir.com/DHEGEYSO-Xarun lagu dawaynayo xanuunka qaaxada oo laga hirgeliyey degmada Bandar-bayla.
DHEGEYSO-Abaartii ugu xumayd oo ka taagan degmada Burtinle iyo deegaamada hoosyimaada.